Pamhepo Kushambadzira Network - Ads Network Yakanyanya Ad
KUZVINYANYA KURI KUDZIDZISWA KWAKANAKA KUSHANDA-KUSHANDISA BHUKU RINONZI
Mhinduro ine simba kwazvo uye yakazara chirongwa chiripo nhasi. Froggy Ads Inopa Iyo Yakanakisa Pamhepo Ads Network
Ipuratifomu inobatanidza yako ese ekudyara edhijitari mune imwe sisitimu yekusimudzira mashandiro,
wedzera kugadzirwa kwechikwata, uye gonesa mhedzisiro.
Wana mhedziso kudzora uye gadzirisa ako makwikwi zviri nyore neyedu yekuzvishandira-inoshambadzira chikuva chevashambadzi!
Zviuru zvevatengesi vanobatana, vanogadzira nharembozha nemakambani epamhepo vari kutoshandisa FroggyAds.com kutyaira traffic, kuwana zvinotungamira nekusimudzira kutengesa.
FroggyAds.com's CPC, CPV uye CPM bhizinesi modhi, inoziviswa kukwidziridza yako ROI. Bhadhara chete zvekuratidzwa chaiko nevanhu chaivo uye uverenge kudzoka chaiko kune kudyara. Yakavakirwa chete pane zvinoonekwa zvinoonekwa, kushambadza kwako kunofanirwa kuratidzwa kune wekupedzisira mushandisi kuverenga. Ino ndiyo nguva yekuzvidavirira uye zvirinani bhizinesi maitiro uye FroggyAds.com iri kutungamira nzira yekusimudzira kuzvidavirira nekudaro uchiendesa premium, chaiyo yakanangwa traffic inoshandura iwe. Mazuva ekubhadhara mari yemapofu akwana. Transparency uye yakakosha kuratidzwa ndizvo zvinounzwa neFroggyAds.com.
Iine akawanda shambadziro fomati Froggy ads ndeye yakanakisa online inoshandura kushambadzira chikuva
Rega Froggy Ads Network ikubatsire iwe kutora bhizinesi rako kuenda padanho rinotevera.
Yakanakisa Targeting ine Akaomesesa Metric: svika kune huwandu hwevanhu hwaunoda riini uye sei iwe uchida nemasimba uye akajeka matriki pamunwe wako. FroggyAds.com inopa maturusi ekubudirira uye inozvirumbidza kushanduka kunodiwa kuzadzisa zvido zvevamwe vedu.
CPC, CPV uye CPM Ads
CPC, CPV uye CPM haisi buzzword, ndiyo nzira nyowani uye yakajeka yekusiyanisa kukosha chaiko kwekushambadzira pane saiti. Kwapera mazuva evashambadziri vari kubhadhariswa kushambadzira vasina kumboona, CPC, CPV uye CPM nhanho yekutamba uye wese anokunda. Vashambadzi vanovimbiswa kubhadhara chete kushambadza kunoonekwa, nekukurumidza vachiwedzera yavo inogona ROI. Vaparidzi vanowana mari yakawanda kune avo ekushambadzira nzvimbo nekuti vanove vanokosha zvakanyanya sezvavanoita zviri pamutemo.
FroggyAds.com inotengesa PREMIUM traffic iyo yakagadzirirwa kuwedzera kugadzirwa uye mushandirapamwe kushanda. Kuva chikamu cheedu network kunogonesa vashambadziri nevaparidzi mukana wekusvika pamatanho matsva ekubudirira.
Traffic Zviri Nyore
Kuchengetedzwa kwekubiridzira kwakachengeteka chimwe chinhu chatinotarisira kwete chete kune ako traffic traffic, asiwo mari yaunotumira nzira yedu! Tine nzira dzakapfava dzekubhadhara kuburikidza neWebMoney, Kiredhiti Kadhi, PayPal kana Bhangi waya Kubhadhara.
Tsvaga mabhenefiti ekushanda kuburikidza neayo yega-sevhisi yekutenga midhiya
Kutanga mishandirapamwe mumaminetsi uchishandisa yedu inonzwisisika mushandirapamwe anovaka uye traffic fungidziro.
Chinja mabidha, mabhajeti, chirongwa uye kunongedza chero nguva.
Ongorora yako mhedzisiro mhedzisiro uye uwane zvakakosha kuona kuti utore dhata-inotungamirwa sarudzo.
Svika kune Vateereri Vepasi Pose Pamapeji Ekumusoro
Performance Kushambadzira Platform. Kupfuura 3.000.000 kushandurwa kununurwa
Nyika Dzakafukidzwa Pasi Pose
AD Kuonekwa Mazuva ese
Premium Mubudisi Sites